Madaxweynen Xasan oo la filayo inuu tago Cadaado – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
14th April 2015 A warsame Af Soomaali, Featured 0
Mareeg.com: Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta la filayaa inuu gaaro degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud, halkaasoo uu ka furmayo shirka gobollada Dhexe.
Madaxweynaha ayaa la sheegay inuu Cadaado u tegaya sidii uu kulamo ula qaadan lahaa Maamulka Ximan iyo Xeeb, odayaasha dhaqanka, saraakiisha nabadgelyada.
Waxaa la filayaa in mar kale lagu dhawaaqo maalinta uu sida rasmiga ah u furmi doono shirka, kadib markii uu Sabtidii dib u dhac uu ku yimid.
Madaxweynaha ayaa sidoo kale kormeeri doonaa Xarunta maamulka Ximan iyo Xeeb u diyaariyey in lagu qabto shirka maamulka loogu dhisayo Mudug iyo Galgaduud.
Maamulka Ximan iyo Xeeb ayaa wali ka soo horjeeda go’aanka Madaxweynaha uu ku magacaabay Caasimada Maamulka Gobollada Dhexe, waxaana la filayaa in arrimahaas xal laga gaaro oo ay iskula soo qaadaan labada dhinac.
Boqolaal ka mid ah Ciidanka Madaxtooyada Magaalada Muqdisho, ayaa waxay shalay galab gaaray Magaalada Cadaado ee Xarunta Maamulka Ximan iyo Xeeb.
Ciidankan, ayaa waxaa Garoonka Cadaado ku soo dhaweeyay masuuliyiin uu ka mid yahay Wasiirka Wasaaraadda Arrimaha Gudaha iyo Federalka Somaliya C/raxmaan Maxamed Xuseen (Odawaa).
Ciidamada Madaxtooyada Somaliya ka socdo, ayaa waxaa lagu wadaa inay ka qayb qaataan suggida ammaanka Magaalada Cadaado, maadaama Arbacada uu ka furmi doono shirka lagu doonayo in Maamulka Gobolada Dhexe lagu soo dhiso.
Ammaanka guud ee Magaalada Cadaado, ayaa si weyn loo adkeeyay, waxaana xaqiijinta amniga iska kaashanaaya Ciidamada Dowladda, Amisom iyo Xoogaga Maamulka Ximan iyo Xeeb.
Qarax & weerar ka dhacay wasarada Tacliinta Somalia